ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်နိုင်ငံက စာဖတ်နှုန်းအမြင့်ဆုံးလဲ - YOYARLAY Digital Media and News
စာဖတ်ခြင်းအလေ့အထဟာ ဒီနေ့ခေတ်ထဲမှာတော့ လူတစ်ယောက်အတွက် အရေးကြီးဆုံးသောအခြေခံစွမ်းရည်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးနက်နက်နဲနဲပြောရရင် ဆက်စပ်တွေးခေါ်ဆင်ခြင်တတ်ဖို့နဲ့ လူအ့ဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ဝင်ဆန့်နိုင်စေဖို့အတွက် စာဖတ်ခြင်းအလေ့က သေရေးရှင်ရေးတမျှကို အရေးပါတဲ့ကိစ္စပါ။
ဆက်စပ်တွေးခေါ်ဆင်ခြင်တတ်ဖို့နဲ့ လူအဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ဝင်ဆန့်နိုင်စေဖို့အတွက် စာဖတ်ခြင်းအလေ့က သေရေးရှင်ရေးတမျှကို အရေးပါတဲ့ကိစ္စပါ
အွန်လိုင်းကစာပေတွေ (သို့) ပုံနှိပ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေထဲကစာတွေကိုဖတ်ရှုမှုကနေ သတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစုံရလာတာကြောင့် လက်ရှိကမ္ဘာကြီးမှာ ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေပြီလဲဆိုတာ မျက်ခြေမပြတ်သိနေနိုင်တဲ့အပြင် အခြားအခြားသော ပြင်ပဗဟုသုတများစွာကိုလည်း ရရှိနိုင်စေပါတယ်။
လူသားရဲ့ဦးနှောက်ဟာ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးနေဖို့ မဖြစ်မနေလိုအပ်ပြီး ဒီလိုအပ်ချက်ကိုလည်း စာဖတ်ခြင်းအလေ့အထက အပြည့်အဝကူညီပေးနိုင်ပါတယ်
လူသားရဲ့ဦးနှောက်ဟာ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးနေဖို့ မဖြစ်မနေလိုအပ်ပြီး ဒီလိုအပ်ချက်ကိုလည်း စာဖတ်ခြင်းအလေ့အထက အပြည့်အဝကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ပိုပြီးလတ်ဆတ်သစ်လွင်တဲ့ စိတ်ကူးတွေနဲ့အတူ ပိုပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့ဖန်တီးမှုတွေ ရှိလာနိုင်စေဖို့ အဓိက အထောက်အကူပေးနိုင်တာကလည်း စာဖတ်ခြင်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်ကဘယ်နိုင်ငံတွေမှာ စာဖတ်နှုန်းဘယ်လောက်ရှိပြီး ဘယ်လိုတွေ တိုးတက်နေကြပြီလဲဆိုတာ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ လေ့လာသိရှိနိုင်ဖို့ ရှာဖွေ တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
စာဖတ်နှုန်းမြင့်မားတဲ့နိုင်ငံစာရင်းအရ နံပါတ် (၁) နေရာမှာရှိနေတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက နိုင်ငံသားတွေက စာဖတ်ဖို့အတွက် ပျှမ်းမျှအားဖြင့် တစ်ပတ်ကို (၁၀) နာရီနဲ့ (၄၂) မိနစ် လောက် အချိန်ပေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တွက်ရင် ပျမ်းမျှစာတတ်မြောက်မှုနှုန်း( (၈၆. ၃%) ထက်တောင်နည်းပါး (၇၄%သာရှိ) တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအတွက် အခုလိုထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေနိုင်တာဟာ အံ့ဩဂုဏ်ယူစရာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့လည်း တရုတ်နိုင်ငံမှာ စာဖတ်ဖို့စိတ်ပါဝင်စားသူဦးရေများလာတာနဲ့အညီ စာတတ်မြောက်မှုနှုန်းကလည်း ဆက်လက်တိုးတက်နေပြီး ၁၉၄၇ ခုနှစ်တုန်းကနဲ့ယှဉ်ရင် (၆) ဆလောက်တိုးလာခဲ့ပါပြီ။ စာဖတ်နှုန်းကိုတိုင်းတာတဲ့နေရာမှာ စာအုပ်နဲ့ဖတ်ရှုမှုကိုတင်တွက်ချက်တာမဟုတ်ဘဲ အွန်လိုင်းစာမျက်နှာမှာဖတ်ရှုမှုတွေကိုလည်းထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာဖတ်နှုန်း ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ တစ်ပတ်ကို ပျမ်းမျှ (၉) နာရီနဲ့ (၂၄) မိနစ်လောက် စာဖတ်ဖို့အချိန်ပေးကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲစစ်တမ်းရလဒ်အရ လူဦးရေစုစုပေါင်းရဲ့ ၈၈ % လောက်ဟာ တစ်ရက်ကို (၂၈) မိနစ်ဝန်းကျင်လောက်ကို စာအုပ်ဖတ်ကြတယ်လို့ သိထားရပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာဖတ်တဲ့အချိန်ထက် စာအုပ်နဲ့ဖတ်တဲ့အချိန်ကပိုများနေတဲ့သဘောပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အိန္ဒိယမှာတွေ့ရသလိုပဲ ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်း စမတ်ဖုန်းနဲ့တက်ဘလက်တွေက စာဖတ်ခြင်းအလေ့အထရဲ့ပုံစံကို ပြောင်းလဲပစ်နေတာမို့ စာအုပ်နဲ့စာဖတ်တဲ့နှုန်းက တဖြည်းဖြည်းတော့လျော့နည်းလာနေပါပြီ။
တရုတ်နိုင်ငံမှာကတော့ တစ်ပတ်အတွက်စာဖတ်ဖို့အချိန်က ပျမ်းမျှအားဖြင့် (၈) နာရီ ရှိပါတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ တွက်ချက်ရင် ပျမ်းမျှစာတတ်မြောက်မှုနှုန်း (၈၆.၃%) ထက်ပိုများ (၉၆. ၄ %ရှိ) တဲ့နိုင်ငံမှာ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်နဲ့ သတင်းစာတွေပဲဖတ်တဲ့အချိန်ကတောင် တသ်ရက်ကို (၁၁) မိနစ်သာသာပဲရှိတယ်လို့ ထူးထူးခြားခြားတွေ့ရပါတယ်။ OECD အစီရင်ခံစာရဲ့အချက်အလက်တွေအရ ရှန်ဟိုင်းမြို့က ကျောင်းသား (၉၀%) လောက်ဟာ စာဖတ်တာကို ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍတစ်ရပ်နဲ့ သတ်မှတ်လုပ်ဆောင်ကြကြောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအကြားမှာ စာဖတ်တဲ့အလေ့အထက ရေပန်းစားလာနေတာမို့ စာဖတ်နှုန်းကတော့ တဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးတက်လာနေပါတယ်။
စစ်တမ်းရလဒ်မှာပါဝင်နေတဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေကိုလည်း ပုံတွေကနေလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Ref: www.worldatlas.com “Countries That Spend The Most Time Reading”
Previous Previous post: Android နဲ့ Google ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကို အသုံးပြုခွင့်ဆုံးရှုံးရတော့မယ့် Huawei
Next Next post: ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဖုန်းသုံးစွဲမှုအတွေ့အကြုံတွေကို ပေးစွမ်းမယ့် Samsung Galaxy A70 မိတ်ဆက်ပွဲ
အီတလီနိုင်ငံက အမျိုးသမီး တစ်ဦးဟာ ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်း လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ ဝတ်ဆင်တဲ့ အကာအကွယ် ခါးပတ်သော့ပျောက်သွားတာကြောင့် မီးသတ်ဌာနမှာ အကူအညီ တောင်းခဲ့တယ်လို့ Telegraph သတင်းဌာနက ဖော်ပြပါတယ်။ Post Views: 2,703
Published: January 19, 20166:47 am Updated: February 15, 20198:37 am
ဖိနပ်ဗူးထဲက ရှေးဟောင်းကြွေအိုးလေးက မထင်မှတ်ပဲ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ တန်ကြေးရှိနေ
အရင်ဆုံး ရိုးရာလေးပရိသတ်တွေကို ပြောချင်တာက ကိုယ့် မိဘ ဘိုးဘွားလက်ထက်က ချောင်ကပ် ပစ်ပယ်ထားမိတဲ့ ဗူးလေးတွေများရှိနေရင် သေချာ ဂရုတစိုက် ရှာကြည့်ပါလို့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခုဆိုရင် ဖိနပ်ဗူးလေး တစ်ဗူးထဲက တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ရှေးဟောင်း တရုတ်ကြွေအိုးလေးဟာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ…
Published: August 8, 20182:36 am Updated: March 9, 20198:51 pm